I-Adobe Creative Cloud: Funda Ukuphrinta Okuhle Kumalayisense! | Martech Zone
I-Adobe Creative Cloud: Funda Ukuphrinta Okuhle Kumalayisense!
NgoLwesibili, Novemba 7, 2017 Douglas Karr
Lapho i-Adobe Creative Cloud yethulwa, ngibhalisile! Akusekho ukuthenga amalayisense abizayo nokuphatha okhiye be-DVD… vele ulande bese ufaka njengoba kudingeka. Sineqembu elimangalisayo elisebenza kumiklamo yethu, kepha imvamisa kufanele senze ukuhlela okusheshayo noma ukulungisa ngemuva kokuthola amafayela kubakhi bethu, ngakho-ke ngathenga ilayisense. Umlingani wami webhizinisi waqala ukusiza, ngakho-ke ngamthengela nelayisense lesibili. Futhi elinye lamakhasimende ethu lalingenaso isabelomali selayisense kepha lalidinga ukuhlela amafayela ngezikhathi ezithile, ngakho-ke ngawathenga ilayisense.
Angikaze Ngifunde Ukuphrinta Okuhle
Bengicabanga ukuthi ngikhokha imali yelayisense yanyanga zonke futhi ngingangeza futhi ngisuse amalayisense njengoba kudingeka. Ngithole kanzima ukuthi akunjalo. Emuva kokuba uzakwethu webhizinisi ethule inkampani yakhe futhi iklayenti lami selidedele isisebenzi ... ngazithola sengikhokhela amalayisense amabili angasetshenzisiwe inyanga ngayinye. Ngemuva kokukhubazeka ngephaneli yokuphatha esabekayo ye-Adobe Creative Cloud nokususa abasebenzisi bobabili, ngibonile ukuthi ukubalwa kwelayisense kuhlala kufana.
Ukusesha okusheshayo "kokususa amalayisense" kusisekelo sabo solwazi kunikeze impendulo akekho owake wafuna… xhumana nabasizi. Ugh… ngivule iwindi lokuxoxa. Ngicabange ukuthi mhlawumbe kukhona ozokhuluma nami ngokungikhubaza amalayisense. Ngemuva kwemizuzu engama-23 namasekhondi angu-51, bakwenza. Kepha kungenzeka kungabi yingakho ucabanga.
Ingxoxo yangempela ifakiwe ngenhla ukukubonisa iphimbo elingenangqondo engangiphonswa ngalo, elingakunaki ngokuphelele ukuthi ngisebenzisa ilayisense lami. Ngiyazi ukuthi lukhulu kangakanani lolu hlelo, mina uthenge ilayisense!
Inkampani elingana no-Adobe kufanele ibe namahloni ngokwethembeka isebenzisa lelisu ukudabula amakhasimende abo ngemali encane. Bengingazi ukuthi bengisayina isivumelwano sonyaka esisha ngokungazi. Ngiyabona ukuthi amanye amabhizinisi anezindleko ezinzima zokugibela namakhasimende, kepha lokho akukho nge-Adobe Creative Cloud. Njenganoma iyiphi enye ipulatifomu ye-SaaS, kufanele ngikwazi ukwengeza nokususa amalayisense womsebenzisi lapho kudingeka. Isizathu sokubhalisela kwami ​​ukuthi ngingumsebenzisi othembekile olazise inani lepulatifomu futhi walikhokhela ngokuzithandela.
Manje sengikhokha u-300% wezindleko zami zelayisense ze-Adobe Creative Suite namanye amalayisense amabili alele. I-Adobe, ngizobe ngikubiza impela ngoJulayi 16, 2018. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi ngithole amanye amapulatifomu.
Isexwayiso: Akukho nokukhetha kuphaneli yezokuphatha ukukhubaza ukuvuselelwa okuzenzakalelayo.
Tags: adobeifu lokudala le-adobei-adobe suite yokudalailayisense ye-adobeifu lokudalaukulayisenisa
Yiziphi Izindlela Zokukhangisa Ezisebenza Ngokuphumelelayo?